Ny lalao quiz 13 tsara indrindra ho an'ny roa | Androidsis
Ny lalao 13 tsy misy dikany tsara indrindra ho an'ny roa
Miaraka izahay Ny lalao quiz 13 tsara indrindra ho an'ny roa ananantsika amin'ny Android ary hamela anay handany fotoana mahafinaritra amin'ny fiarahana izy ireo, farafaharatsiny mahatsapa fa milalao mifanohitra amin'ny olona iray ao an-trano izahay.
Izany hoe miatrika isika lalao multiplayer miorina amin'ny turn-turn izay ahafahantsika maminavina teny, mahafantatra zavatra momba ny jeografia na koa mamorona teny. Lalao maimaim-poana sy freemium izay manasa antsika hilatsaka mandritra ny fotoana kelikely eo am-pandriana alohan'ny hatory. Ataovy.
2 Mandehana Scrabble
3 Trivia Crack - Ny lalao trivia mampiala voly indrindra
4 Reacteur 2 mpilalao
5 Iza no te ho tonga milionera?
6 Jeopardy! Trivia Quiz lalao fampisehoana
7 Nanontaniana 2
8 Quiz Multiplayer Quiz
10 Lalao momba ny jeografia
Tsy hisy hamitaka izany maka tahaka mazava ny lalao malaza Trivial Pursuit ary ho an'ilay tsy manana fahazoan-dàlana akory, fa satria tena mafy ny fahatsiarovantsika ilay anarana ao anaty fahatsiarovantsika ary mihoatra ny iray na kely aza dia mandeha amin'ny moron'ny fanontaniana iray ihany, dia lasa lalao fanontaniana mangatsiatsiaka be miaraka amin'ny loko maro, miaraka amina endrika tsara ary eo amboniny dia amin'ny Espaniôla; Mbola manontany tena isika hoe rahoviana ny Trivial Pursuit no hamoaka lalao quiz ho an'ity lehilahy roa ity, satria hahomby izany. Manana an'io maimaimpoana io izahay ao amin'ny Play Store.
TRIVIA 360: Lalao Quiz
Nalefa tamin'ny taon-dasa raha nanomboka ny areti-mandringana, dia lalao tonga tamintsika na nandoko mba hanadinoana ny zava-nitranga rehetra sy ny ambony miaraka amin'ny iray amin'ireo lalao filokana malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra. Manana andiana litera ao aminay izahay afaka ahafahanay manoratra teny eny amin'ny solaitrabe mitana toerana iray izay azon'ny mpanohitra ampiasaina koa hamoronana ny azy ireo. Lalao iray tena tsara niasa tamin'ny Android ary, na dia tsy lalao fanontaniana fotsiny aza izy io, satria misy ifandraisany betsaka amin'ny litera sy ny teny, ary amin'ny maha-kilalao roa azy, dia tsy azon'ny fakam-panahy hametraka azy io isika lisitry ny lalao tsara indrindra ho an'ny fanontaniana roa.
Trivia Crack - Ny lalao trivia mampiala voly indrindra
Avy amin'ny etermax, ny meloka amin'ny ento aty aminay ilay Apalabrado fanta-daza tamin'ny taonany lasa izayTonga eto i Trivia Crack, lalao trivia Trivial Pursuit amin'ny teny Espaniôla ary lasa nalaza ho an'ny roa izy. Maimaimpoana ary amin'ny asa tsara rehetra an'ity studio videogame ity izay misy lohateny maromaro dia afaka nanao laza teo amin'izao tontolo izao. Azonao atao ny mifaninana amin'ireo mpilalao erak'izao tontolo izao ary manana laharana an'izao tontolo izao izy hahafantarana ny misy anao; izany rehetra izany raha mifamatotra ampy handany andro sy andro hilalaovana amin'ny ankohonanao sy ny namanao avy amin'ny fiononan'ny sofa ao an-tranonao ianao. Maimaimpoana, mazava ho azy.
Reacteur 2 mpilalao
Avy amin'ny fahatsoran'ireo mekanika lalao, dia afaka nanantona mpilalao an'arivony sy an'arivony maro izy. Ny hatsaran-toetra lehibe amin'ity lalao ity dia ny tsy mila finday hafa, fa avy amin'izany dia afaka milalao olona roa amin'ny fotoana iray isika. apetraho tsirairay isika amin'ny iray amin'ireo sisiny ambony sy ambany amin'ilay fitaovana; tsara kokoa ho takelaka noho ny refy ao aminy. Ary satria niresaka momba ity lalao ity izahay dia aza hadino ny lisitr'ireo Ny lalao 29 tsara indrindra ho an'ny finday roa izay ananantsika amin'ny Android. Eto isika dia tsy maintsy mihantsy ny namantsika na ny fianakaviantsika amin'ny fitsapana izay misy reflexes haingana sy faharanitan-tsaina mitana andraikitra lehibe handresena. Maimaimpoana toy ny maro hafa amin'ity lisitry ny lalao quiz tsara indrindra ho an'ny Android ity.
Developer: hazo serizy mangatsiatsiaka
Iza no te ho tonga milionera?
Ny iray amin'ireo lalao malaza indrindra amin'ny fahitalavitra ary misy ny lalao Android ofisialy eto ho anao hiatrika ity fifaninanana ity na hanohitra ny mpiara-miasa na namana haneho ny fahalalanao na izy ireo mihitsy no manimba anao amin'ny azy. Samy manana palitao fiainana samy hafa izay haintsika rehetra ny manontany ny besinimaro na 50/50, miampy iray vaovao mamela antsika hanontany manam-pahaizana. Ny iray amin'ireo hatsarany dia ny fisokafan'ny tanàna hamela antsika hitety an'izao tontolo izao ary haneho ny fahalalantsika. Maimaim-poana mba hahafahantsika milalao azy ivelan'ny seranana aza tsy misy olana.
Millionaire Trivia: Lalao TV
Jeopardy! Trivia Quiz lalao fampisehoana
Sony mihitsy no nandefa ity lalao fampisehoana fahitalavitra vaovao ity izay mandeha amin'ny làlana mitovy amin'ilay teo aloha, na dia ny olana mety hitranga dia ny amin'ny teny anglisy, ka raha mila Espaniôla ianao dia afaka manohy ny manaraka. Raha nampidirinay tao amin'ity lisitry ny lalao roa tsara indrindra ho an'ny fanontaniana ity dia satria amin'izao fotoana izao dia fifaninanana fahita fahita any Etazonia izany efa azo antoka fa amin'ny fotoana sasany dia hianjera amin'ireo faritra ireo izy, ka tena mahay mampihatra anglisy (tampoka, aza adino ireo fampiharana ireo hianarana ity fiteny ity) Ahoana ny fomba hahalala azy, amporisihinay an-karihary izy. Ho afaka hilalao amin'ny mpilalao hafa eran'izao tontolo izao ianao ary haneho ny fahalalanao amin'ny fanontaniana maro.
Loza! ® Fampisehoana lalao amin'ny TV Trivia
Ary raha nilaza an'izany izahay Etermax efa nanao laza teo amin'ny tontolon'ny lalao video izy Izy io dia satria fantany koa ny fomba ahazoana sombin'ny Trivia Crack miaraka amina tohiny, ary mazava ho azy antsoina hoe Trivia Crack 2. Miaraka amin'ny fototr'ilay teo aloha, fa miaraka amin'ny fanatsarana hita eo amin'ny interface tsara ho an'ny traikefa gaming nohatsaraina. Mazava ho azy, ahafahanao milalao lalao amin'ny mpilalao hafa na mandeha amin'ny Internet hifanatrika amin'olona. Anisan'ireo hatsarany ny fahafaha-mivoatra amin'ny alàlan'ny fahazoana ny endri-tsoratra rehetra amin'ny sokajy rehetra toa ny fromazy amin'ny Trival Pursuit, na dia eto aza dia milamina kokoa ny zava-drehetra. Manana izany maimaim-poana avy amin'ny Play Store ianao.
Quiz Multiplayer Quiz
Lalao hafa izay raiso ny teny hoe Trivial hisarihana ny besinimaro ary izany dia ahafahantsika milalao amin'ny mpilalao hafa, na manao fanazaran-tena amin'ny tenantsika aza mba hanitatra ny fahalalantsika sy hiatrika an'io mpiara-miasa amintsika io indraindray izay manome antsika nefa tsy mamela antsika miaina. Lalao efa vita tsara izay tsy manana fampidinana sy famerenana betsaka toy ny teo aloha, fa safidy tsara azo raisina izany satria amin'ny teny espaniola. Maimaimpoana indray ho anao ny misintona izao.
Developer: Walkme finday
Mandeha amin'ny lafiny iray hafa amin'ny lalao fanontaniana isika ary manalavitra azy io mba hanakaikezana ny scrablle, satria eto isika dia tsy maintsy mameno ny toerana banga mba hamenoana ireo teny araka ireo litera hitantsika teo. Lalao mahaliana iray noho ny amin'ny Espaniôla ary manana kalitao ampy izy io hahafahantsika mankafy azy mandritra ny fotoantsika. Maimaimpoana indray ary miaraka amin'ireo maody mpilalao roa ireo hankafizinay miaraka amin'ny traikefan'ny teny sy ny taratasy.
Eritrereto hoe: lalao triatra trivia
Lalao momba ny jeografia
Misvix Games no mitondra antsika ity lalao fanontaniana ity fa mifantoka amin'ireo ankizy kely ao an-trano izany noho ny fanontaniana apetrany amintsika. Izany dia sokajy samihafa ary raha te hilalao ny zanakao Amin'ny lalao mitovitovy amin'izany, saingy azonao valiana amin'ny fanontaniana mora ity, ity, indrindra ho an'ny taranja jeografia, dia tena mahaliana, ankoatry ny hoe amin'ny Espaniôla no manamora ny raharaha.
Developer: Lalao misvix
Lalao espaniola vaovao miavaka amin'ny fanontaniana, fa nangonina tamin'ny fomba samihafa izay nahatonga azy io ho fanamby hafa amin'ny zavatra nilalaovantsika tamin'ny lalao teo aloha, amin'ity lisitr'ireo fanontaniana tsara indrindra ho an'ny roa ity. ny maody maivana karazana izay tsy maintsy handresentsika ny kintana rehetra Alohan'ny sisa amin'ireo mpilalao (manomboka amin'ny mpilalao 2 ka hatramin'ny 6), maody iray hafa izay hamaliantsika fanontaniana 20 ary iza koa no marina no mandresy, ary karazana hafa ny tic-tac-toe na mila hazavaintsika satria tsotra be io. Ny zava-misy fa manana maody maromaro isika dia mametraka azy amin'ny toerana somary manokana hialana amin'ny sisa. Mazava ho azy fa anananay maimaim-poana izany.
Developer: Fianarana Tambourine.
Tambourine Estudio indray, mitovy amin'ny Atriviate, dia namoaka ity lalao ity ho an'ny Android izay mampiavaka azy maka tahaka ny lalao fahitalavitra malaza izay maro no lasa milionera. Mamela antsika hilalao lalao amin'ny mpiara-miasa na fianakaviana, ankoatry ny an'ny Multiplayer an-tserasera hiatrika mpanohitra izay tsy fantatsika akory. Hanana taratasy isika izay hanombohan'ilay teny sy hanondroantsika azy alohan'ny mpifanandrina amintsika. Lalao maimaim-poana hafa hafa kely amin'ny lohahevitra, fa tena mahaliana.
Ary tsy misy roa raha tsy misy telo ary handeha hiaraka amin'i Etermax indray izahay sy ity lalao vaovao manaraka ity aorian'ny Trivia Crack, izay loko lalao lalao ary tokony hamerenantsika ny satroboninahitra amin'ny alàlan'ny tabilao iray izay hametrahan'izy ireo antsika alohan'ny fanamby. Lalao iray amin'ny fanontaniana indray, na dia misy karazany hafa aza ary amin'ny Espaniôla, noho izany dia tsy afaka mangataka bebe kokoa ianao.
Ireo dia Ny lalao 13 tsy dia tsara indrindra ho an'ny mpilalao roa ananantsika amin'ny Android ary ahafahanao milalao miaraka amin'ny olon-drehetra, satria matetika izy ireo tsy mandany fotoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao 13 tsy misy dikany tsara indrindra ho an'ny roa
Ny fampiharana fampakaram-bady 7 tsara indrindra ho an'ny Android
Fangatahana hisoratra anarana any am-piasana maimaimpoana